Runyararo Kuburikidza neKushanya: Sei Louis D'Amore achiparadzira hutachiona?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Runyararo Kuburikidza neKushanya: Sei Louis D'Amore achiparadzira hutachiona?
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • wedzero • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Louis D'Amore igamba uye yakapihwa rukudzo urwu neWorld Tourism Network.
Lous D'Amore ndiye mutungamiri uye muvambi weInternational Institute for Runyararo Kuburikidza neKushanya. (IIPT)
Nezuro IIPT yaipemberera Kurangarira Makore makumi matatu nemashanu erunyararo kuburikidza neKushanya. Iyo chikuva chaive chiitiko chekutanga cheiyo World Tourism Network (WTN)
Zviuru zvevateveri vakatarisa chiitiko ichi pane akasiyana mapuratifomu enhau, kusanganisira eTurboNews uye livestream.travel. Vanenge zana mazana eWTN vakapinda chiitiko chaicho. Iine vatungamiriri vazhinji vakazvipira mukufamba uye kushanya kubva kutenderera pasirese, zvaiita kunge mhuri yepasi rose iri kuuya pamwechete.
Markly Wilson ndiye Director we Kushambadzira Kwenyika Dzese yeNew York State Tourism. Aimbove Director weKushambadzira weCaribbean Tourism Organisation uye, kwemakore mapfumbamwe, US Manager weBarbados Board of Tourism.
Akaudza vateereri kuti akaparadzira sei hutachiona hwekushanya kwemakore mazhinji. Akati Louis d'Amore akamutapurira, asi yaive hutachiona hwakanaka.
Louis D'Amore akakorokotedza WTN nekuvhura kwayo uye akanzwa kuti sangano ratove nesimba. World Tourism Network yakatangwa nenhengo dze kuvaka.travel hurukuro boka. D'Amore akabvuma kutungamira Runyararo Kuburikidza neKushanya Kwechikwata Boka paWorld Tourism Network.
Nhengo yega yega yepaneru yaive nenyaya yayo yekufungisisa pamakore makumi matatu nemashanu apfuura. Panelist yaisanganisira inosanganisirwa
Dr. Taleb Rifai - Sachigaro, IIPT International Advisory Board
Louis D'Amore, IIPT Muvambi uye Mutungamiriri
Markly Wilson IIPT Bhodhi revatungamiriri
Diana McIntyre, IIPT Nyanza
Pike, Mutungamiri, IIPT Australia
Gail Parsonage, Mutungamiri, IIPT Australia
Reza Soltani, IIPT Mufananidzo uye Kutaurirana
Birgit Trauer, Mutungamiriri wekutanga, Iyo Tsika Angle
Fabio Carbone, Mumiriri weIIPT paGuru neMutungamiri, IIPT Iran
Juergen Steinmetz, mutungamiri World Tourism Network